DF oo wax kama jiraan ku tilmaantay kulanka Farmaajo iyo Uhuru | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo wax kama jiraan ku tilmaantay kulanka Farmaajo iyo Uhuru
Dowladda Fadaraalka ayaa beenisay wararka sheegaya in Madaxweyana waqtigu ka dhamaaday Farmaajo uu gorgortan ka galay kiiska badda Soomaaliya ee Kenya muranka galisay, kaas oo dacwadiisu taallo Maxkamadda Caddaalada Adduunka ee ICJ.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, ayaa waxba kama jiraan ku timaantay wararka sheegay in Madaxweynaha watigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ay dhawaan ku kulmayaan dalka Qatar, si ay u saxiixaan heshiiska ay gaareen labada dhinac.
War ka soo baxay Wasiirka Wasaaaradda Warfaafinta Xukuumadda xil-gaarsiinta, Cusmaan Dubbe, ayaa lagu sheegay in ay been abuur tahay wararka la xariira safarka Farmaajo ee Qatar.
"Cilaaqaadka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya oo hore u xumaaday waxa hadda laga shaqaynayaa sidii loo wanaajin lahaa, waan u mahad-celinaynaa wadamada ka shaqeeyey isu soo dhowaan tan" ayuu yiri Dubbe.
“Xilligan waxba kama jiraan wararka la faafinayo ee sheegaya in labada Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay hadda kulmayaan kuna kulmayaan Doha/Qatar.” Ayuu yiri Cismaad Dubbe.
Wasiirka Warfaafinta, wuxuu sheegay in arrinta badda Soomaaliya ay taallo Maxakamad lana sugayo, jawaabta ka soo baxada.
“Arrinka Badda Soomaaliyana wuxu ku jiraa gacanta Maxkamadda Caddaalada Adduunka ee ICJ, waxaana la wada sugayaa go’aanka Maxkamadda”. Ayuu sidoo kale Wasiir Dubbe.
Dowladda Soomaaliya ayaa dib u soo celisay xiriirka diblumaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Keyna, waxaana heshiiskaan ka shaqeeyay dalka Qatar.
Heshiiskaan iyo Safarkii Ergeygii Qatar ee Al-Qahtaani, waxaa ka dhashay, shaki xoogan oo la xariira kiiska Badda, warar soo baxay ayaana sheegay in Dowladda Qatar ay doonayso hirgalinta hiigsiga shirkadda Qatar Petroleum, ee ah soo saaridda qeyb ka mid ah kheyradka ku jira saddex block oo ka mid ah kuwa ku yaalla biyaha Soomaaliya ee Kenya muranka galisay.